ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံးသမ်မတကွီး ဟိုဆေးမူဟိကာရဲ့ အတုယူဖှယျရာဘဝနနေညျး – May News
သမ်မတတျောတျောမြားမြားကတော့ သမ်မတဘဝကနေ အနားယူလိုကျတာနဲ့ မခမျြးသာဘူးဆိုရငျတောငျ မဆငျးရဲကွပါဘူး။ အားလုံးသိတဲ့အတိုငျး သမ်မတတဈယောကျရဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျခြိနျ ရရှိတဲ့ လစာရယျ၊ အစိုးရက ထောကျပံ့တဲ့ ပငျစငျလစာရယျဆိုတာ နိုငျငံတဈခုမှာတော့ လုံလုံလောကျလောကျ ရှိလရှေိ့ပါတယျ။
ဟိုဆေးမူဟိကာအကွောငျး သငျလညျး တီးမိခေါကျမိရှိမယျထငျပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံး သမ်မတကွီးလို့လညျး တျောတျောမြားမြားက တငျစားကွပါတယျ။ သူ့နာမညျစာလုံးပေါငျးအတိုငျးဆိုရငျတော့ ဟိုဆေးမူဂြီကာ (José Mujica) လိျု့ ထှကျကွမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ စပိနျ၊ ဥရုဂှေး၊ ပျေါတူဂီတှကေတော့ ဟိုဆေးမူဟိကာလို့ ထှကျကွပါတယျ။
သူဟာ အခုဆို အသကျ (၈၅)နှဈတောငျ ရှိပါပွီ။ (၂၀၁၀)ခုနှဈကနေ (၂၀၁၅)ခုနှဈအထိ သမ်မတတာဝနျ ထမျးဆောငျခဲ့ပွီး၊ သမ်မတရာထူးကနေ အနားယူတော့ ငယျငယျက လုပျခဲ့တဲ့ တောငျသူအလုပျနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အသကျမှေးဝမျးကွောငျး ပွုပါတယျ။ သူဟာ သမ်မတဘဝမှာကတညျးက ရတဲ့လစာရဲ့ (၉၀)%ကို ဆငျးရဲသားတှအေတှကျ လှူပါတယျ။
ငှပေမာဏအားဖွငျ့ ဒျေါလာ (၁၂၀၀၀)ကို လစဉျလှူတာပါ။ သူ သမ်မတရာထူးက နားတော့ သူ့မှာ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့လညျး ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံးသမ်မတလို့ သတငျးတှကေ တငျစားကွပါတယျ။ (၂၀၁၀)ခုနှဈက သူရဲ့ပိုငျဆိုငျမှုတှကေို ကွညောတဲ့အခါမှာ သူပိုငျငှကွေေးဟာ ထိုစဉျက ဒျေါလာ (၁၈၀၀)သာ ရှိပါတယျ။
သူရဲ့စီးတျောကားကလညျး အလနျးစားမဟုတျပါဘူး။ 1987 Volkswagen Beetle ကားလေးဖွဈပါတယျ။ (၂၀၁၂)ခုနှဈမှာတော့ ဇနီးသညျရဲ့ စီးပှားရေးနဲ့ပိုငျဆိုငျမှုတှေ ပေါငျးစပျလိုကျတဲ့အခါ လယျမွတှေေ၊ လယျထှနျစကျတှအေပွငျ၊ အိမျတဈလုံးပါဝငျလာခဲ့ပွီး၊ စုစုပေါငျးတနျဖိုးအားဖွငျ့ ဒျေါလာ (၂၁၅၀၀၀)ဝနျးကငျြ ရှိခဲ့ပါတယျ။
ဇနီးဖွဈသူ Lucía Topolansky နဲ့ ဟိုဆေးတို့ဟာ (၂၀၀၅)ခုနှဈက အသကျကွီးမှ လကျထပျခဲ့ကွတဲ့ စုံတှဲဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ ကလေးလညျး မထှနျးကားခဲ့ပါဘူး။ ဇနီးကတော့ သူ့ထကျ (၉)နှဈငယျပွီး၊ အလှနျရိုးသားတဲ့ စကားကိုတောငျ လေးလုံးကှဲအောငျမပွောတတျတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျပါ။ နှဈယောကျသား အေးခမျြးစှာနဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးနပေါတယျ။
သမ်မတကွီးရဲ့ ဘဝနနေညျးဆုံးမစကားတှကေတော့ ” ကိုယျ့ရှိတာနဲ့ တငျးတိမျရောငျ့ရဲပါ”၊ “ပိုငျဆိုငျမှုဆိုတာ တနျဖိုးရှိပါတယျ … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါတှကေ မငျးရဲ့ဘဝဆီက အခြိနျတှကေို ယူသှားလို့ပါ “၊ ” ကိုယျတကယျလိုအပျတာကိုပဲ ဝယျပါ … ကိုယျတကယျ ထိုကျသငျ့တာကိုပဲ ပိုငျဆိုငျအောငျလုပျပါ”၊ ” ငါတို့တဈတှဟော တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မြှဝဖေို့ သငျယူရမယျ”၊
” တခွားသူတှကေို ဘယျလိုအကွောငျးပွခကျြနဲ့မှ အကပျြမကိုငျပါနဲ့ “၊ ” ခြောငျပိတျပွီးရိုကျတာကို အောငျပှဲလို့မသတျမှတျနဲ့”၊ “တခွားလူတှနေဲ့ တူညီတဲ့အခကျြကို ကွညျ့ပါ … မတူညီတဲ့အခကျြတှကေို မနှိုငျးယှဉျပါနဲ့”၊ “လူတိုငျးကို ခှငျ့လှတျဖို့မလိုပမေယျ့၊ ခှငျ့လှတျတဲ့စိတျနဲ့ သငျ အသကျရှငျဖို့လိုပါတယျ”တို့ ဖွဈပါတယျ။
Ref ; Internet / calltheone
ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးသမ္မတကြီး ဟိုဆေးမူဟိကာရဲ့ အတုယူဖွယ်ရာဘဝနေနည်း
သမ္မတတော်တော်များများကတော့ သမ္မတဘဝကနေ အနားယူလိုက်တာနဲ့ မချမ်းသာဘူးဆိုရင်တောင် မဆင်းရဲကြပါဘူး။ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း သမ္မတတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ချိန် ရရှိတဲ့ လစာရယ်၊ အစိုးရက ထောက်ပံ့တဲ့ ပင်စင်လစာရယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ခုမှာတော့ လုံလုံလောက်လောက် ရှိလေ့ရှိပါတယ်။
ဟိုဆေးမူဟိကာအကြောင်း သင်လည်း တီးမိခေါက်မိရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး သမ္မတကြီးလို့လည်း တော်တော်များများက တင်စားကြပါတယ်။ သူ့နာမည်စာလုံးပေါင်းအတိုင်းဆိုရင်တော့ ဟိုဆေးမူဂျီကာ (José Mujica) လို့် ထွက်ကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် စပိန်၊ ဥရုဂွေး၊ ပေါ်တူဂီတွေကတော့ ဟိုဆေးမူဟိကာလို့ ထွက်ကြပါတယ်။
သူဟာ အခုဆို အသက် (၈၅)နှစ်တောင် ရှိပါပြီ။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်ကနေ (၂၀၁၅)ခုနှစ်အထိ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး၊ သမ္မတရာထူးကနေ အနားယူတော့ ငယ်ငယ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ တောင်သူအလုပ်နဲ့ အေးအေးဆေးဆေး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပါတယ်။ သူဟာ သမ္မတဘဝမှာကတည်းက ရတဲ့လစာရဲ့ (၉၀)%ကို ဆင်းရဲသားတွေအတွက် လှူပါတယ်။
ငွေပမာဏအားဖြင့် ဒေါ်လာ (၁၂၀၀၀)ကို လစဉ်လှူတာပါ။ သူ သမ္မတရာထူးက နားတော့ သူ့မှာ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးသမ္မတလို့ သတင်းတွေက တင်စားကြပါတယ်။ (၂၀၁၀)ခုနှစ်က သူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ကြေညာတဲ့အခါမှာ သူပိုင်ငွေကြေးဟာ ထိုစဉ်က ဒေါ်လာ (၁၈၀၀)သာ ရှိပါတယ်။
သူရဲ့စီးတော်ကားကလည်း အလန်းစားမဟုတ်ပါဘူး။ 1987 Volkswagen Beetle ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှာတော့ ဇနီးသည်ရဲ့ စီးပွားရေးနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ လယ်မြေတွေ၊ လယ်ထွန်စက်တွေအပြင်၊ အိမ်တစ်လုံးပါဝင်လာခဲ့ပြီး၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးအားဖြင့် ဒေါ်လာ (၂၁၅၀၀၀)ဝန်းကျင် ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဇနီးဖြစ်သူ Lucía Topolansky နဲ့ ဟိုဆေးတို့ဟာ (၂၀၀၅)ခုနှစ်က အသက်ကြီးမှ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ စုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကလေးလည်း မထွန်းကားခဲ့ပါဘူး။ ဇနီးကတော့ သူ့ထက် (၉)နှစ်ငယ်ပြီး၊ အလွန်ရိုးသားတဲ့ စကားကိုတောင် လေးလုံးကွဲအောင်မပြောတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ နှစ်ယောက်သား အေးချမ်းစွာနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေပါတယ်။
သမ္မတကြီးရဲ့ ဘဝနေနည်းဆုံးမစကားတွေကတော့ ” ကိုယ့်ရှိတာနဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲပါ”၊ “ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာ တန်ဖိုးရှိပါတယ် … ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒါတွေက မင်းရဲ့ဘဝဆီက အချိန်တွေကို ယူသွားလို့ပါ “၊ ” ကိုယ်တကယ်လိုအပ်တာကိုပဲ ဝယ်ပါ … ကိုယ်တကယ် ထိုက်သင့်တာကိုပဲ ပိုင်ဆိုင်အောင်လုပ်ပါ”၊ ” ငါတို့တစ်တွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျှဝေဖို့ သင်ယူရမယ်”၊
” တခြားသူတွေကို ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ အကျပ်မကိုင်ပါနဲ့ “၊ ” ချောင်ပိတ်ပြီးရိုက်တာကို အောင်ပွဲလို့မသတ်မှတ်နဲ့”၊ “တခြားလူတွေနဲ့ တူညီတဲ့အချက်ကို ကြည့်ပါ … မတူညီတဲ့အချက်တွေကို မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့”၊ “လူတိုင်းကို ခွင့်လွှတ်ဖို့မလိုပေမယ့်၊ ခွင့်လွှတ်တဲ့စိတ်နဲ့ သင် အသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ်”တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အပွုံးလေးတဈခကျြနဲ့ ခရီးသညျတှကေို စှဲလမျးသှားစမေယျ့...
Stop by my page: buy real Instagram likes
Havealook at my web site – best delta 8 gummies
My web site – weed near me – http://www.peninsuladailynews.com,
Feel free to visit my web page :: buy weed near me
Feel free to surf to my blog post buy weed online – http://www.juneauempire.com,
painkiller for dogs ibuprofen says:
Havealook at my blog post … painkiller for dogs ibuprofen
buy hashish oil online says:
Feel free to surf to my page buy hashish oil online
are you able to get good health insurance through your employer? Ramonda Vincenty Grevera
Awesome post. I amaregular visitor of your site and appreciate you taking the time to maintain the nice site. I will bearegular visitor foralong time. Meghan Jaye Denni
takip 2018 takipçi sitesi says:
But, what about this? what if you addedalittle information? I ain’t saying your content isn’t solid., but what if
I mean ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံးသမ်မတကွီး ဟိုဆေးမူဟိကာရဲ့ အတုယူဖှယျရာဘဝနနေညျး – May News isalittle boring.
viewers interested. You might addarelated video orarelated pic or two to get readers interested about everything’ve got
my web page :: aaa1188 slot
Look at my homepage :: hengheng2 playboy2, Curtis,
Feel free to visit my web site … 918kaya game;
my web site: game slot love138
May I simply say whatarelief to uncoveraperson that really understands what they are talking about online.
Also visit my web site … possy888
Also visit my web site :: lpe88 trusted company; https://918kiss-m.com,
Feel free to surf to my webpage … https://www.donedealnepal.com/user/profile/9838
My spouse and i ended up being really thrilled when Peter managed to complete his
homework while using the ideas he grabbed through your weblog.
It is now and again perplexing to simply find yourself releasing tips
and hints many others have been trying to sell. And we
acknowledge we now have the website owner to give thanks to for
that. Those illustrations you made, the easy
blog navigation, the relationships you give support to foster – it is all extraordinary,
and it is helping our son and our family reckon that this concept is amusing, and that’s
extraordinarily essential. Many thanks for the whole thing!
Look into my page; http://anapa-alrosa.com.ru/
Also visit my web blog; https://wiki.cowise.info
Fine way of telling, and fastidious post to obtain information regarding my presentation focus, which i am going to convey in institution of higher education.
it, you might beagreat author.I will make certain to bookmark your blog and will often come back from now on. I want to encourage you continue your great work, haveanice afternoon!
get data on the topic of my presentation topic, which i am going to deliver in college.
A motivating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you ought to write more about this issue, it may not beataboo matter but usually folks
Hello friends, its fantastic post about tutoringand entirely explained, keep it up all
you’veahuge readers’ base already! https://785days.tumblr.com/ dating sites
I have read so many posts concerning the blogger lovers but this article is in factanice post,
I am in fact happy to read this web site posts which contains tons of helpful data, thanks for
If some one needs expert view regarding runningablog afterward i propose him/her to go to see this web site, Keep up
Hello it’s me, I am also visiting this site daily, this web site is actually pleasant and the viewers are genuinely sharing fastidious thoughts.
work on. You have performedaformidable activity and our whole community will be grateful
WOW just what I was looking for. Came here by searching for http://tinyurl.com/yyak2ca5
Thanks for finally talking about > ကမ်ဘာ့အဆငျးရဲဆုံးသမ်မတကွီး ဟိုဆေးမူဟိကာရဲ့ အတုယူဖှယျရာဘဝနနေညျး
– May News < Liked it!